Gcina ii-Apple Watch straps zakho kule ngxowa kwi -ululoo | IPhone iindaba
Gcina ii-Apple straps zakho kule ngxowa ye -ululook
ULuis Padilla | 29/04/2021 20:00 | Apple Watch, Ezahlukeneyo
Emva kweminyaka emininzi yokusebenzisa iApple Watch, ingqokelela yeebhendi sele iqaphelekile kwaye oko kuthetha ukuba ufuna indawo yokugcina. Le ngxowa yesikhumba ye-elektroniki ilungile kubungakanani bayo, uyilo kunye nexabiso layo.
Ngokufika kwe-Apple Watch, iApple yavula imakethi entsha yokufikelela kwi-smartwatch yayo apho imitya ihlala kwindawo ephambili. Okwethu abane-Apple Watch, Enye yezinto ezimbi kakhulu kukuthenga imitya emitsha ngezihlandlo ezahlukeneyo: ezemidlalo, isikhumba, isinyithi, ukuqonda, ukubamba amehlo ... Kwaye emva kweminyaka eliqela sele siqokelele intwana yemitya esoloko sifuna ukuyinxiba kuhambo lwethu nakwiholide. Enye yeengxaki oku kubandakanya ukugcinwa kwayo kunye nokuthuthwa kwayo, kwaye kulapho ke le ngxowa isebenzayo evela kwi -ululook iza kusebenza.
Yenzelwe ngokukodwa iApple Watch, kwaye ngaphakathi kukho indawo yemitya emininzi. Ngokukodwa, inemingxunya emithandathu, kuyo nganye esinokubeka kuyo umtya omnye ukuya kwemithathu, ukuze sikwazi ukuthwala ukuya kuthi ga kwiibhanti ezili-18 kule ngxowa. Ikwanazo neepokotho ezingaphakathi apho sinokuhambisa khona itshaja kunye nentambo yokutshaja yeeVenkile zeeNkqubo, ngenxa yoko sisixhobo esifanelekileyo kuhambo lwethu kuba siza kuphatha yonke into esiyifunayo ukonwabela iApple Watch yethu.
Uyilo lwengxowa luhle kwaye lububulumko. Yenziwe ngesikhumba sokwenziwa, ine-zipper efanelekileyo yokuyivula, kunye nepokotho yangaphandle yokuthwala nayiphi na into esiyifunayo. Inobungakanani obulungele ukukwazi ukuphatha nawuphi na ubhaka okanye umthwalo wesandla, kwaye ulwakhiwo lwayo lulungile. Ukuvalwa kwesikhwama kunye nenkqubo ye-zipper kukhuseleke kakhulu, kwaye imitya ayiphumi kwindawo yabo nokuba ibhegi ihanjiswe ngaphakathi kubhaka wethu okanye ityesi.
I-Lululook Apps Watch strap bag ilungele ukugcina imitya yethu kwaye siyithwale kuhambo lwethu nayo yonke into esiyifunayo ukusebenzisa iApple Watch yethu kude nekhaya. Ngendawo yokuya kuthi ga kwiibhanti ezili-18 (ezintathu kwisithuba ngasinye), isikhumba sokwenziwa senziwe siziva silungile kwaye umgangatho wokwakha ulungile. Nge $ 34,99 andikwazi ukucinga ngombono ongcono wokugcina kunye nokuhambisa ingqokelela yethu yemitya. Ungayithenga kwiwebhusayithi esemthethweni ye -ululook kwi esi sixhobo.
I-Apple Watch strap bag
Ithunyelwe nge: 29 April 2021
Isikhumba sokwenziwa esithandekayo ekuphathweni
Isithuba ukuya kuthi ga kwiibhanti ezili-18
Ayifumaneki ngemibala emininzi
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Gcina ii-Apple straps zakho kule ngxowa ye -ululook
U-Apple ubanga ukuba i-12,9-intshi ye-IP Pro entsha isebenza nekhibhodi yomlingo yangaphambili nangona ingazukuvala ngokugqibeleleyo